Seza efa ela niasana, andao omena endrika vaovao !
vaovao ireo seza efa ela tao an-trano, raha toa ka efa somary mankaleo ny mahita azy. Mbola azo atao tsara mihitsy ny manome endrika hafa sy mahafinaritra azy ireny, sady tsy lafo akory ny manamboatra azy.
Azo omena aina 1. Lokoina
Mialohan’ny hanamboarana azy dia diovina aloha ilay seza. Kikisana amin’ireny “papier vert” ireny ilay seza, ka rehefa vita izay dia avela ho maina. Lokoina araka izay hitiavana azy. Na atao samy hafa aza ny lokon’ny lamosiny sy ny fipetrahana, maninona moa ?!
Misy ireo lamban-tseza efa be mpivarotra eny an-tsena eny, saingy somary manahirana ihany ny mitady azy ireny. Mba hifanaraka kokoa amin’ny endrika sy loko ampiasaina ao an-trano dia tsara raha mividy lamba manokana mihitsy. Zairina manokana ny lamban’ny lamosina ary ilay “coussin” kosa, asiana tadiny mba ho azo afatotra amin’io lamosin-tseza io.
3. Atao fitoeram-boninkazo
Rehefa tsy azo amboarina sy hipetrahana intsony ilay seza dia azo ovaina ho fitoeram-boninkazo. Lokoina ihany mba hanintona ny maso ny mijery azy. Raha lehibe ilay seza dia lavaka antonona an’ilay tavim-boninkazo ihany no amboarina eo afovoany. Tsy atao tratan’ ny orana kosa ny toerana hametrahana azy, sao ho vasoka aloha loatra indray ilay lokony.